Tapitra ny Ebola any RD Congo fa manomboka ny coronavirus · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny Ebola, miomana amin'ny COVID-19 ny ankamaroan'ny Kongoley
Voadika ny 27 Marsa 2020 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, Ελληνικά, عربي, English
Nanolotra fitaovana fanasa tanana an-jatony toy ity ampiasain'ny Minisitry ny Fahasalamam-pirenena, Dr. Félix Kabange Numbi, any RD Kongo eto ity ny UNICEF. Saripika MONUSCO/Dominique Wolombi tao amin'ny Flickr.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ny guest contributor Esdras Tsongo, mpitati-baovao sady mpanao gazety Kongoley monina any atsinanan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Zahao ny fitantarana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany.
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Repoblika Demokratikan'i Kongo fa tsy misy intsony ny olona mararin'ny Ebola. Ny Talata 3 Martsa 2020, nanambara ny Fikambanana Erantanin'ny Fahasalamana (OMS) fa efa salama tsara ny marary farany ary navoaka tao amin'ny tobim-pitsaboana any Beni, Kivu Avaratra, any atsinanan'i RD Kongo.
Efa fandresena io na dia mbola tsy nifarana teo aza ity valanaretina ity: Beni no foiben'ny Ebola tany RD Kongo teo aloha .
SAINGY raha nanambara ny fiafaran'ny Ebola i RD Kongo dia niatrika ny tranga voalohany tamin'ny COVID-19 — ilay aretina mahafaty olona maro noho ny coronavirus vaovao — tamin'ny 8 Martsa 2020 ary nohamafisin'ny OMS tamin'ny 10 Martsa izany.
Tao Kinshasa, renivohitra no nahitana ny tranga voalohany. Kongoley, 52 taona, ilay marary izay niverina tany RD Kongo avy any Frantsa. Tsy nahitana soritr'aretina izy raha tonga. Na izany aza, nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana iray ao amin'ny Kaominina Ndji'li izy, araka ny fanambarana navoakan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana, izay nilaza fa miasa manaraka sy mamantatra ireo olona rehetra nifandray tamin'ny marary nanomboka ny 8 Martsa 2020 ny sampana ara-pahasalamana.
Farafahakeliny 23 ankehitriny ny tranga voamarina any RD Kongo, hatramin'ny 22 Martsa, araka ny OMS, anisan'izany ny fahafatesana iray vokatry ny viriosy.
Omaly, nanamafy tranga vaovao miisa 5 ny INRB [Ivontoerana Nasionaly ho an'ny Fikarohana Biomédicale]. Kongoley daholo izy ireo. Ireo ekipan'ny fahasalamana no mikarakara azy ireo. Niaina ny trangam-pahafatesana COVID19 voalohany ihany koa isika omaly.
Noraran'ny RD Kongo ny fivoriana lehibe, nanome baiko ny fanakatonana ny sekoly sy ny oniversite nandritra ny efatra herinandro ary nanidy ny sisintaniny amin'i Rwanda, ny fepetra rehetra natao dia mba hanakanana ny fihanaky ny viriosy. Naaton'ny governemanta ihany koa ny sidina iraisam-pirenena rehetra avy any amin'ny firenena ahitana ny trangana COVID-19 maro.
Nilaza i Mory Keita, mpandrindra ny OMS izay miasa any amin'ireo faritra voakasiky ny Ebola fa mitohy hatrany ny teny filamatra amin'ny fitandremana rehefa miresaka ny areti-mifindra rehetra. Nomarihiny ny fanaovam-baksiny mba ahafahan'ny olona misoroka ny trangana virosy.
Any amin'ny faritany Kivu Avaratra, nahafatesana olona maherin'ny 2.000 ny valanaretina Ebola. Tranga miisa 3.400 no nisy ary olona miisa 1.169 no sitrana nanomboka tamin'ny 1 Aogositra 2018.
Nandray fepetra hentitra hiadiana amin'ny Ebola tany amin'ny faritra misy azy i Nzanzu Carly Kasivita, governoran'i Kivu Avaratra. Hoy i Kasivita tamin'ny Global Voices:
Amin'ny maha governora ahy, nikarakara diabe fanohanana aho mba hahafahan'ny mponina ao Kivu Avaratra manaraka ny fihetsika tsara indrindra hiadiana amin'ny Ebola ary niezaka aho nanetsika ny vahoaka, faly aho nanambara fa efa 21 andro mahery izao no tsy nahitana trangana viriosy Ebola.
Tamin'ny 17 Jolay 2019, nanambara ny Ebola ho fahamehana ara-pahasalamana ho an'ny daholobe teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny OMS, izay nanetsika fitaovana sy fanohanana bebe kokoa hiadiana amin'ny Ebola tany amin'ny faritany miisa telo ao atsinanan'i RD Kongo: Kivu Avaratra, Kivu Atsimo ary Uturi.
Nilaza tamin'ny Global Voices tamin'ny telefônina i Jean-Jacques Muyembe, sekretera ara-teknika any RD Kongo fa nanomboka ny 2 Martsa 2020 dia sitrana ireo marary farany ary navoaka tao amin'ny Foibe Fitsaboana Ebola.
Na izany aza, araka ny filazan'ny OMS, mila manisa 42 andro avy amin'ny fanamafisana fisian'ny tranga farany tamin'ilay viriosy vao ambara fa fongana tanteraka izany amin'ny 12 Aprily 2020.
Nilaza i Muyembe fa afaka miady amin'ny coronavirus ihany koa ireo vahoaka ireo toy ny niadiany tamin'ny fiparitahan'ny Ebola.
Miatrika coronavirus any RD Congo
Vaovao ratsy ho an'ny faritra izay lasibatry ny Ebola ny coronavirus. Na izany aza, misy itovizany maro ireo areti-mifindra matanjaka roa ireo na dia mbola mora mifindra kokoa aza ny Ebola noho ny COVID-19.
Araka ny filazan'i Muyembe, mitandrina ny ankamaroan'ny Kongoley ary miomana amin'ny COVID-19 rehefa avy niaina areti-mifindra Ebola. Hampiasa fepetra nitovy tamin'izany amin'ny lafiny fanaraha-maso ny olona nifanerasera sy ny ametrahana elanelana ara-tsosialy sy ara-batana hiadiana amin'ny coronavirus ny mpiasan'ny fahasalamana.
“Firenena Afrikana faha-11 voakasiky ny COVID-2019 i RDC, saingy ny fihetsika natao mba hiarovana tamin'ny Ebola ihany no tsy maintsy tazonina amin'ny dingana hiadiana amin'ity virosy vaovao ity,” hoy i Muyembe tamin'ny Global Voices.
Nanazava i Muyembe fa nanapa-kevitra ihany nony farany ny filankevitry ny minisitra fa hatoka-monina mandritra ny 14 andro any an-trano ireo olona rehetra avy any Frantsa, Alemaina, Italia, Iran, Irak ary Shina, na dia “tsy misy soritra tazo, kohaka, fanaviana, aretin'andoha, havizanana mafy aza ary arahan'ny ekipan'ny mpitsabo maso mandritra ny 14 andro arakaraka ny taratasy fampahafantarana nangonina avy amin'ireo karatra ara-pahasalamana ho an'ny mpandeha. ”
Ankoatra izay, nilaza tamin'ny Global Voices i Muyembe fa hafindra any amin'ilay toerana mitoka-monina ary hokarakarain'ny Minisiteran'ny Fahasalamana ny olona rehetra izay “ahitana fisehon'aretina [coronavirus] eny am-pahatongavana ka heverina fa mampiahiahy.”
Mandritra izany fotoana izany, nilaza ny manam-pahaizana ao amin'ny OMS fa mikasa ny hanao fanadihadiana antsoina hoe “Firaisankina” izy ireo izay novolavolaina taorian'ny fanadihadiana momba ny Ebola tamin'ny taona 2018 mba hanaovana andrana ireo fanafody efa nampiasaina niadiana tamin'ny virosy hafa.
Mety ilàna marary marobe an'arivony ity fanadihadiana ity izay mety ho hita fa sarotra saingy araka izay ho fahombiazan'ny governemanta hitantana ny fiaraha-miasany amin'ny OMS. Saingy mety hahavonjy aina maro ny vokatra.